2012eas Ylusoes de 1 Profecia: Birmanês: ကင်ဆာနှင့်အခြားနှင့်အတူလူများအတွက်အိမ်ခြံမြေအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ... : ငါကင်ဆာနှင့်အခြားသာမန်မဟုတ်တဲ့နှင့်အတူလူများအတွက်အိမ်ခြံမြေအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပတ်လည်ဥပဒေမူကြမ်းအတွက်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ အဲဒီမှာစီမံကိန်းအတွက် respe ...
Birmanês: ကင်ဆာနှင့်အခြားနှင့်အတူလူများအတွက်အိမ်ခြံမြေအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ... : ငါကင်ဆာနှင့်အခြားသာမန်မဟုတ်တဲ့နှင့်အတူလူများအတွက်အိမ်ခြံမြေအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပတ်လည်ဥပဒေမူကြမ်းအတွက်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ အဲဒီမှာစီမံကိန်းအတွက် respe ...
2012 ခုနှစ်နှင့် Ylusoes 1 ပရောဖက်ပြု: ကင်ဆာနှင့်အခြားနှင့်အတူလူများအတွက်အိမ်ခြံမြေအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ... : ငါကင်ဆာနှင့်အခြားသာမန်မဟုတ်တဲ့နှင့်အတူလူများအတွက်အိမ်ခြံမြေအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပတ်လည်ဥပဒေမူကြမ်းအတွက်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ အဲဒီမှာစီမံကိန်းအတွက် respe ...
ကင်ဆာရောဂါနှင့်အတူ Portal ကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ - Institute မှ Oncoguia
Oncoguia Institute မှတစ်ဦးအန်ဂျီအိုနှင့်သိကောင်းစရာများနှင့်အပြန်အလှန်ပေါ်တယ်ကင်ဆာနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်အသက်တာ၏အရည်အသွေး, ၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်အများပြည်သူအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။
သင့်ရဲ့မြို့တော်စည်ပင်ကကြောင့်အခွင့်အရေးရှိသည်မပါဘူးဆိုရင် ", လက်မှာဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်ပါတယ်ကြားရှိခေါင်းစဉ်မှကောင်စီဝင်နှိပ်ပါ။ NGO များနှင့်လူနာအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူစုစညျး။ ဒါဟာဖိအားလိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ် "ဟုရှေ့နေဂျိမ်း Farina Mato, တက္ကသိုလ် Oncoguia ၏ဥပဒေရေးရာညွှန်ကြားရေးမှူးကရှင်းပြသည်။
အဆိုပါ Oncoguia, ကင်ဆာရိုက်နှက်ထိုပေါ်တယ်မိတ်ဖက်တပြီးသားလူနာဖို့ဒီကင်းလွတ်ခွင့်ပေးကြောင်းမြူနီစီပယ်၏စာရင်းကိုရှိပါတယ်။ ကြည့်ရှုပါ: အ RS ။
Velha / RS အပန်းဖြေစခန်း - ဥပဒေအမှတ်ထားသော 1,641 / 2010 - HIV နဲ့ကင်ဆာနှင့်အတူအိမ်ခြံမြေအခွန်လူမျိုး၏အခမဲ့။
San Miguel မစ်ရှင် / RS - ဥပဒေအမှတ်ထားသော 1,985 / 2010 - အငြိမ်းစားအိမ်ခြံမြေအခွန်၏အခမဲ့, 60 နှင့်လေးနက်သောရောဂါများနှင့်အတူလူကျော်လူ။ကျနော်တို့မြို့အတွက်လူကြိုက်များပဏာမခြေလှမ်း၏ဤစိတ်ကူး incampar ဖို့ကူညီလိုပါတယ်။
2012 hkunhaitnhaint Ylusoes 1 parawhpaatpyu: kainsar nhaint aahkyarr nhang aatuu luu myarraatwat aainhkyaanmyay aahkwankainnlwathkwin ... : ngar kainsar nhaint aahkyarr sarmaan mahotetae nhang aatuu luu myarraatwat aainhkyaanmyay aahkwankainnlwat hkwin paatlai upadaymuukyam aatwat hcatewainhcarr mipartaal . aelldemharhcemankeinaatwat respe ...
kainsarrawgar nhaintaatuu Portal ko hcateshi shinae - Institute mha Oncoguia
Oncoguia Institute mha tait u aaangyaeao nhaint sikaungghcararmyarr nhaint aapyanaalhaan pawtaal kainsar nhaint aatuu luunar twayaatwat aasaat tar eat aaraiaasway, ၎innthoeteat misarrhcumyarr nhaint aamyarrpyisuu aapaw aarrone hcuu hcite sai .
saint rae myahoettawhcaipain k kyount aahkwinaarayy shisai m parbhuusorain ", laatmhar swaynway tainpya ninepartaal kyarrshi hkaungghcain mha kaunghcewain nhaiutpar . NGO myarr nhaint luunar aasainnaahpwalmyarr nhaint aatuu hcuhcanyya . darhar hpiaarr loaautsawhpyitpartaal " hu shaenaygyaaim Farina Mato, takkasol Oncoguia eat upadayrayyrar nywhaankyarrrayymhauu k shinnpyasai .
aasopar Oncoguia, kainsar ritenhaat hto pawtaal matehpaat t pyeesarr luunar hphoet de kainnlwat hkwin payy kyaungg myauu ne hce paal eat hcarrainnko shipartaal . kyi shu par:aRS .
Velha / RS aapaannhpyayhcahkaann - upadayaamhaathtarrsaw 1,641 / 2010 - HIV nae kainsar nhaint aatuu aainhkyaanmyay aahkwan luumyoe eat aahkamae .
San Miguel maitshin / RS - upadayaamhaathtarrsaw 1,985 / 2010 - aangyaaimhcarr aainhkyaanmyay aahkwan eat aahkamae, 60 nhaint layynaat saw rawgarmyarr nhang aatuu luu kyaw luu .
kyanawthoet myahoet aatwat luukyaitemyarr panarm hkyaylham eat ihcatekuu incampar hphoet kuunye lopartaal .
Postado por 2012 Ylusões de 1 Profecia às 2/23/2017 10:14:00 PM